Ogeysiis Shaqooyin ka banaan Primeir Bank - iftineducation.com
Ogeysiis Shaqooyin ka banaan Primeir Bank
iftineducation.com – Premier Bank waxaa uu ku waregelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed in bankiga ka banaan yihiin boosas shaqo oo dhowr ah.
Shaqooyinka bannaan ayaa dhamaantood ah kuwo la xiriira suuq-geynta adeegga bankiga, waxaana lagu dhiiri gelinayaa cid kasta oo leh ugu yaraan aqoon dugsi sare iyo khibrad la xiriirta hawlaha suuq-geynta in ay shaqooyinkan soo dalbato.
Cidii shaqooyinkan danaynaysa, waxaa laga codsanayaa in ay INTERVIEW u timaaddo laamaha Bankiga ee Bakaaro ama KM4 maalmaha Sabtiga iyo Axadda, 9-10ka Luulyo sanadka 2016, saacaddu marka ay tahay 8 Subaxnimo ilaa 12-ka Duhurnimo halkaas oo lagu soo dhaweyn doono.
Waxaa sidoo kale laga codsanayaa qof kasta oo danaynaya shaqooyinkan in uu horay u soo qaato documents-kiisa waxbarasho.
Wixii faahfaahin ah nagu soo weydii page-keenna facebook-ga ee:
sidee u weyneeyaa naasahayga